Madaxweynaha Puntland oo sheegay in Dalka uu Mas’uul ka yahay Ra’iisul Wasaare Rooble daawo Muqaalka | Dayniile.com
Home Warkii Madaxweynaha Puntland oo sheegay in Dalka uu Mas’uul ka yahay Ra’iisul Wasaare...
Madaxweynaha Puntland oo sheegay in Dalka uu Mas’uul ka yahay Ra’iisul Wasaare Rooble daawo Muqaalka
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa ku eedeeyay Madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo in uu xagal daacinayo doorashadii uu ku wareejiyay Raisal wasaare Rooblr.
Deni ayaa markii ugu horaysay ka hadlay Qilaafka u dhaxeeya Farmajo iyo Rooble, waxa uuna sheegay in farmaajo uu si cad baarlamanka hortiisa ka sheegay inuu mas’uuliyadda amniga iyo doorashooyinka uu ku wareejiyay Ra’iisul Wasaare Rooble, kadib qalalaasihii April dhacay ee ka dhashay isku daygii muddo kororsiga.
“Waxaan rajeynayaa in heshiiska uu sidiisa u hirgelo, islamarkaana ra’iisul wasaaraha uu mas’uuliyadda ka saaran doorashada iyo amniga dalka uu u guto sidii loogu talo-galay, madaxda kalena, oo madaxweynuhu ugu horreeyo ay fuliyaan wixii ay ballan-qaadeen, oo ay ra’iisul wasaaraha siiyaan fursad uu shaqadiisa ku guro.”
Sidoo kale Hadalka Deni ayaa imaanaya Xili xalay uu bur buray Heshiis laga dhex waday Madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday iyo Raisal wasaare Rooble.
Previous articleLiverbool oo caawa hogaanka ku qaban karta 16 dhibcood
Next articleQaramada Midoobey oo cambaareysay weerarkii Ceelgaabta ee Muqdisho
Dowladda Soomaaliya oo aqbashay xukunka Maxkamadda ICJ ee kiiska badda